Akụkọ - Gini na - eme ma oburu na mmanu hydraulic nke ike nke hydraulic ahọrọghị nke ọma
Anyị niile maara na ike nke hydraulic bụ nke ya na ahụ mmadụ, yana mmanụ hydraulic pụrụ iche maka igwe haịdrọlik nwere ike ịdị ka ọbara mmadụ. Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ọbara, ọ ga-eweta ọtụtụ ọnọdụ. Taa Huai'an Power Unit ga-agwa gị ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ahọpụtaghị mmanụ ụgbọ mmiri nke ike hydraulic n'ụzọ kwesịrị ekwesị?
Dị nnọọ ka ọbara mmadụ, ọ bụrụ na ọbara nwere nsogbu, mgbe ahụ ahụ mmadụ ga-arụ ọrụ, na hydraulic ike nke na-arụ ọrụ mmanụ haịdrọlik ga-eme ka ọdịda dị iche iche na sistemụ njikwa nke hydraulic power unit ngwaahịa. Ka anyị leba anya n'okwu ndị a!
Viscosity nke mmanụ hydraulic nke ike hydraulic adịghị n'ime oke kwesịrị ekwesị. Dịka ọmụmaatụ, achọrọ iji usoro hydraulic mee ihe n'okpuru ọnọdụ nke 20-70 Celsius. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ahọpụtara mmanụ hydrogen VG46 nke nwere ikikere viscosity nke 100 n'oge a, mmanụ dị na viscosity kinematic na ogo 20 Celsius bụ 1 34,6 cST.
Ọ bụrụ na sistemụ hydraulic nke ike hydraulic na-eji gas-liquid direct contact accumulator, mmiri na glycol enweghị ike iji ya.
Tụnyere mmanụ ịnweta, sịntetik refractory mmanụ nwere elu njupụta. Mmanụ na-emegharị mmiri nwere ọ bụghị naanị nwere njupụta dị elu kamakwa o nwere alụlụ dị elu, nke ga-ewepụta nguzogide dị ukwuu nke mmụba mmanụ, yabụ iji zere mgbapụta na-akpata cavitation na vibration, should kwesịrị izere iji mmanụ ndị dị otú ahụ.
Maka obere akụrụngwa hydraulic eji n'okpuru ọnọdụ nke nnukwu mgbanwe okpomọkụ, ọ bụrụ na ngbanwe nke viscosity bụ oge 3, ụta ahụ ga-agbanwekwa oge 3, nke ga-enwe mmetụta ka ukwuu na obere mmiri hydraulic.
Yabụ, onye na-ahụ maka ike ọkụ na-echetara onye ọ bụla na mgbe ị na-ahọrọ mmanụ mmanụ hydraulic-kpachara anya ịhọrọ dịka ọnọdụ ọrụ gị n'ezie si egbochi ụdị mmebi ọ bụla nke sistemụ hydraulic.